Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.5.3 Gamification
Sahan Standard waxaa lagu caajiso ka qaybgalayaasha, laakiin in karaa oo waa in la beddelo.
Ilaa hadda, waxaan idiin sheegay oo ku saabsan hababka cusub in ay dalbanayso in la fududeeyey wareysiyo computer-maamusho. Si kastaba ha ahaatee, mid ka biyodiiday of wareysiyo computer-maamula waa in aysan jirin waraysanaya aadanaha si ay u caawiyaan abaari ka qaybqaadashada. Tani waa dhibaato sababtoo ah sahan labaduba waa waqti lumis iyo caajis. Sidaa darteed, mustaqbalka, samaynta sahanka u socdaan in ay aad ku qorshayso hareeraha ka qaybgalayaasha iyo hannaanka looga dhigo mid ka mid ah jawaabay su'aalo dheeraad xiiso leh iyo ciyaar u eg. Nidaamkan waxaa mararka qaarkood loo yaqaan gamification.
Si aad u muujiso waxa baadhitaan xiiso u ekaan karaan sida, aynu fiirsan Friendsense, baadhitaan oo la soo baakadeeyey sida ciyaar on Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, oo Duncan Watts (2010) doonayay inuu qiimeeyo, inta dadku qabaa inay tahay sida saaxiibadooda iyo inta ay si dhab ah waa sida saaxiibadood. Tani waxay su'aal ku saabsan la mid ah fikirka dhabta ah oo ay garteen si toos ah uu ugu awoodda ay dadku si sax ah Arkaa deegaanka bulshada iyo sidadban for kala fogaansho siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqa isbedelka bulshada. Fikir, la mid ah fikirka dhabta ah oo ay garteen waa wax fudud in lagu cabiro. Cilmibaadhayaasha ayaa laga yaabaa in ay kaliya ka codsaday dad badan oo ku saabsan fikradaha ay ka dibna la weydiiyey saaxiibadood ku saabsan fikradahooda (tani u oggolaanaysa in cabiraada heshiiska aragti dhab ah) iyo waxay ku weydiisan karaa dad badan oo si u maleynayaa in dabeecadaha saaxiibadood '(tani u oggolaanaysa in cabiraada ah heshiiska habdhaqanka gartay). Nasiib darro, waxa Ma'aha waa mid aad u adag tahay in waraysi labada jawaab ah iyo saaxiibkeed. Sidaa darteed, Goel iyo asxaabta u soo jeestay in ay baadhitaan galay app Facebook in uu ahaa mid xiiso leh in uu ciyaaro.
Ka dib markii ay ka qayb oggolaadeen in ay daraasadda cilmi ah, app la doortay saaxiib ka account Facebook jawab iyo weydiiyay su'aal ku saabsan habdhaqanka of saaxiib in (Jaantuska 3.9). Intermixed su'aalaha ku saabsan saaxiibo xushay, jawaabaha ayaa sidoo kale su'aalo nafteeda ku saabsan jawaabay. Marka aad ka jawaabto su'aal ku saabsan saaxiib, jawaabaha waxaa loo sheegay in iyada jawaab ahaa mid sax ah ama, haddii iyada saaxiib ahaa oo aan ugu jawaabay, jawaab ahaa awoodaan in ay dhiiri saaxiibteeda inay ka qayb qaataan. Sidaas darteed, sahanka faafay qayb dhex qorista viral.
Jaantuska 3.9: Wajahadda ka waxbarasho Friendsense ah (Goel, Mason, and Watts 2010) . cilmi-soo jeestay baadhitaan habdhaqanka caadiga ah gelin a xiiso leh, waayo-aragnimo gamelike. app ayaa ka codsaday ka qaybgalayaasha labada su'aalo dhab ah oo su'aalo dheeraad ah lighthearted, sida mid ku cad in image this. Image isticmaalay iyada oo ruqso ka Sharad Goel.
su'aalo aragti ayaa laga soo xigtay Survey Guud bulshada. Tusaale ahaan, "ma [saaxiib aad] nixi Israel badan Falastiin in xaaladda Bariga Dhexe?" Iyo "Shallaytadaydee [saaxiibkaa] cashuur sare ee dowladda si ay u siiyaan daryeelka caafimaadka universal?" On top of su'aalahan halis ah , cilmi ku qasan in su'aalo dheeraad ah lighthearted: "? lahayd [saaxiibkaa] halkii khamri cabbin in ka badan biir" iyo "? Shallaytadaydee [saaxiibkaa] halkii awood u leeyihiin inay akhriyaan maskaxda, halkii ay awood u duuli" Kuwani su'aalo lighthearted Yeelay nidaamka more xiiso leh in ay ka qaybgalayaashu iyo sidoo kale awood la barbardhigo xiiso leh: heshiis dabeecad ahaan lahayd mid ah su'aalo siyaasadeed oo halis ah sida su'aalo ku saabsan lighthearted la cabbo iyo Kooxahan?
Waxaa jiray saddex natiijada ugu weyn ee ka daraasadda. First, saaxiibo ahaayeen u badan tahay in la siiyo jawaab isku mid ahayn shisheeyayaal, laakiinse xataa saaxiibo dhow weli diiddan oo ku saabsan 30% ka mid ah su'aalaha. Second, jawaabeyaasha badan-qiyaaso ay heshiis la saaxiibadood. In si kale loo dhigo, inta badan kala duwanaanta fikradaha ka dhex jira saaxiibo aan la ogaaday. Ugu dambeyntii, ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen sida ay u badan tahay in laga war hayo khilaafka saaxiibadood arrimaha khatarta ah ee siyaasadda ka badan arrimaha ku saabsan lighthearted la cabbo iyo loolama.
Inkastoo app mar dambe waxaa laga heli karaa inuu u ciyaaro (nasiib daro), waxa uu ahaa tusaale fiican u ah sida cilmi baadhitaan habdhaqanka caadiga ah wax farxad leh awoodo. More guud ahaan, iyada oo qaar ka mid ah hal-abuurka iyo shaqo design, waxaa suurtagal ah si loo hagaajiyo waayo-aragnimo user ka qaybgalayaasha sahanka. Sidaas, marka danbe ee aad la dhigaayo baadhitaan, qaado daqiiqad in aad ka fikirto waxa aad samayn kartid si ay u waayo-aragnimo fiican ka qaybgalayaasha aad. Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in ka Cabsan in tallaabooyinkan xagga gamification dhaawici karta tayada xogta, laakiin waxaan u maleynayaa in ay ka qaybgalayaashu caajiso waa halis ka weyn in tayada xogta.
shaqada ee Goel iyo asxaabtii kale oo uu sawirayaa theme of qaybta xigta, la xiriirinaya sahan in ilo kale oo macluumaadka. Xaaladdan oo kale by xiriirinaya sahanka la Facebook cilmi si toos ah u lahaa inay helaan liiska saaxiibo ka qaybgalayaasha. In qaybta xigta, waxaan ka fiirsan doonaa xiriirka u dhexeeya sahan iyo ilo kale oo macluumaadka si faahfaahsan weyn.